အမေဇုံဂီတ၏ ၂ လအခမဲ့အကန့်အသတ်မရှိရယူရန် Androidsis
အမေဇုန်မှဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုက ၂ လအခမဲ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Francisco Ruiz | | Android application များ, အခမဲ့ဂီတ, NOTICIAS, လဲ tutorial
သင်ရချင်ပါသလား Music Unlimited ၏2အခမဲ့လအမေဇုံမှ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုကအရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ နောက်စာကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်မည်နှင့်သင်ရယူရန်သင်လိုက်မီရမည့်လိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့အကောင်းဆုံးဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုများထဲကတစ်ခု ယခုအဘယ်အရာကိုသင်တို့ကိုကမ်းလှမ်း ချုပ်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်လအခမဲ့ - တာဝန် - ရုံးတင်စစ်ဆေး.
1 Amazon Music Unlimited ဆိုတာဘာလဲ။
2 Amazon Music Unlimited ၏ ၂ လအခမဲ့ဤလမှကျွန်ုပ်မည်သို့အကျိုးရနိုင်သနည်း။
3 Amazon Music Unlimited မိသားစုအစီအစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
3.1 ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အမေဇုံဂီတ Unlimited ကန်ထရိုက်
Amazon Music Unlimited ဆိုတာဘာလဲ။
အမေဇုံအားဖြင့်ကန့်သတ်ဂီတဖြစ်ပါတယ် သင့်အတွက်သင့်လျှော်သော Android terminal တွင်သီချင်းပေါင်းသန်း ၅၀ ကျော်ရရှိရန်အခွင့်ပေးသည့် Amazon ၏ streaming music service အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာနားထောင်နိုင်ပါပြီ။
ပိုပိုပြီးကြီးထွားလာနေတဲ့ streaming ဂီတဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသုံးသူနည်းပညာ၊ အ ၀ တ်အစား၊ ကစားစရာများနှင့်အစားအစာများကိုပင်ရောင်းချသောကြီးစွာသောအွန်လိုင်းစတိုး၏အတွေ့အကြုံကိုယုံကြည်ကိုးစားသောအသုံးပြုသူအသစ်များနှင့်အတူအနုပညာရှင်များနှင့်စံချိန်တင်ကုမ္ပဏီအသစ်များနှင့်အတူ။
Amazon Music Unlimited နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ application တစ်ခုရှိပြီးငါကြိုးစားခဲ့တာအကောင်းဆုံးပါပဲ Android အတွက်ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အားလုံးကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီဆိုတာကိုငါစိတ်ချနိုင်သည်။
အယ်လ်ဘမ်များ၊ အယ်လ်ဘမ်များ၊ ဖွင့်ရန်စာရင်းများ၊ ရေဒီယိုများသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များအလိုက်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်အလွန်ကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါပြောလိုသည်မှာဤနောက်ဆုံးအကြံပြုချက်အမျိုးအစားသည်၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်စဉ်ကစာသားအတိုင်းရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Music Unlimited မှတဆင့်သင်နားထောင်နေသည့်ဂီတသမိုင်းကို အခြေခံ၍ သင့်အားကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များပေးခြင်းထက်အခြားတစ်ခုမျှမရှိပါ။
Amazon Music Unlimited ၏ ၂ လအခမဲ့ဤလမှကျွန်ုပ်မည်သို့အကျိုးရနိုင်သနည်း။
ဒီကနေအကျိုးခံစားရဖို့ ပထမ ဦး ဆုံးစာရင်းပေးသွင်းခြင်း ၄၀၀၀ ကိုသာကန့်သတ်ထားသည် Amazon Music Unlimited ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင်သည်အလွန်မြန်ဆန်။ သင်၏ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုငှားရမ်းရန်သာလိုသည် ဒီတူညီတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်။ ထိုအခါငါအလွန်မြန်ဆန်စွာအလေးပေးသောပထမ ဦး ဆုံး subscriptions ကို 4000 မှကန့်သတ်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်ခြင်းအပြင်, ဒါကြောင့်စနေနေ့အချိန် 22:2017 နာရီ, ဒီဇင်ဘာလ 00, 00 တွင်ယနေ့ညမှသာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ကတည်းကအချိန်အတွက်ကန့်သတ်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည် လာမည့်ဒီဇင်ဘာလ 24, 2017 23:59 နာရီ GMT + 1 မှာ။
တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာမိသားစုအစီအစဉ်ကိုသင်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်အား ၀ န်ဆောင်မှုမပေးမှီ၊ စာမေးပွဲမကုန်မီမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမည်သည့်ကတိက ၀ တ်ဖြင့်မဆိုစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီး၊ (သင်ပထမဆုံးငှားရမ်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်အမျှ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကတိထားရာနှစ်လအတွင်းတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ )။ ကျွန်ုပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကောင်းကျိုးများသည်အလွန်ကောင်းသောကြောင့် ၆ ယောက်အကြားငှားရမ်းထားလျှင်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး လျှင် ၂.၅ ယူရိုသာလျှင်မိသားစု ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Amazon Music Unlimited မိသားစုအစီအစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
por ၁၄.၉၉ ယူရိုငွေဟာတစ်လကိုယူရို ၂.၅ ယူရို ၆ ဒေါ်လာကြားမှာရှိပါတယ်Amazon Music Unlimited သည်ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်တွင်အသုံးပြုသူခြောက်ယောက်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိအကျွမ်းများကို ၆ ခုအထိပါ ၀ င်ခွင့်ပြုထားသဖြင့်အမေဇုံ၏ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအားသာချက်များအားလုံးကိုခံစားနိုင်သည်။
သီချင်းသန်း ၅၀ ကျော် ၎င်း၏တရားဝင်ကက်တလောက်နှင့်တစ်ရက်ပြီးတစ်နေ့ကြီးထွားလာသည်။
တစ် ဦး ချင်းနှင့်လုံးဝအမှီအခိုကင်းသောအကောင့်များကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များ.
ပထမရက်မှ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သည့်ကတိက ၀ တ်မပြုဘဲခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်တိုင်ရုံးတင်စစ်ဆေးချိန်သို့မဟုတ်သင်ပေးဆောင်ရသောအချိန်ကိုလေးစားပါလိမ့်မည်။
ပါဝါဖြစ်နိုင်ခြေ အပြည့်အဝသီချင်းများသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်များကို download လုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်းကိုမထိခိုက်စေဘဲအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှေးကွေးခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုနားထောင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Android အတွက်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် shutdown timer ရှိသည်။ Spotify သည်နှစ်နှင့်ချီ။ အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ဖူးသော်လည်း၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိသေးပါ။
၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်သူများအတွက်တစ်နှစ်လျှင် ၁၄၉ ယူရိုအထူးနှုန်းဖြင့်သင်တစ်ခေါက်သွားလျှင် ၂ လအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အမေဇုံဂီတ Unlimited ကန်ထရိုက်
Android application ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ Amazon Music Unlimited streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဘယ်လိုစာရင်းသွင်းရမလဲ ဒီကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးကိုဒီလိုင်းတွေအောက်မှာဘဲချန်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုသူတို့ကယူရို ၁၀ ဒေါ်လာပေးခဲ့တယ်။ အမေဇုံအပေါ်ဖြုန်းဘို့။
ကျွနု်ပ်တို့သည်ဗီဒီယိုထဲတွင်ကျွန်ုပ်ပြောနေသောကမ်းလှမ်းချက်သည်သက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သည် ဒါပေမယ့်ဗွီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ငှားရမ်းစနစ်ဟာ Android application နဲ့အတူတူပဲ။ ကျွန်တော်ထပ်ခါတလဲလဲပြောရရင် Android အတွက် streaming ဂီတလျှောက်လွှာမှာကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အမေဇုန်မှဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုက ၂ လအခမဲ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Galaxy J2 2018 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်
Huawei နှင့်မူပိုင်ခွင့်သဘောတူညီချက်ကို Nokia လက်မှတ်ရေးထိုး